Raki-pahalalana - Howling Pixel
Roa arivo taona izay no nisian'ny rakipahalalana voalohany ; ny rakipahalalana voalohany, Tantara Voajanahary ("Histoire Naturelle" amin'ny teny frantsay), dia nosoratan'i Pliniosy Be Taona tamin'ny 77 CE tany ho any. Ny raki-pahalalana araka ny amantaratsika azy amin'izao fotoana izao, dia nipoitra tamin'ny taonjato faha 17. Tafiditra anaty boky iray ny raki-pahalalana, kanefa ny raki-pahalalana sasany, toa ny Encyclopaedia Britannica amin'ny fiteny anglisy, na ny Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana amin'ny fiteny espaniola, dia raki-pahalalana misy "volume" amam-polony (32 ho an'ilay voalohany, 70 ho an'ilay faharoa). Ankehitriny, misy raki-pahalalana elektrônika (an-tranonkala na amin'ny CD), toy ny Wikipedia (manana sampanana amin'ny fiteny mahery ny 250), na Citizendium.
Amin'ny teny malagasy, maro ireo fomba fanoratana ny teny raki-pahalalana : azo soratana hoe rakipahalalana (tsy misy tsipi-panohizana na diakritika) na raki-pahalalàna (misy tsipi-panohizana ary diakritika). Ekena fa misy avokoa ireo fanoratan antenantenan'ny tranga voalaza teo aloha (izay misy tsipi-panohizana na/sy diakritika).
Pliniosy Be Taona
Ny asa fanaovana rahalalana voalohany izay fantatra amin'izao fotoana izao, dia ny Naturalis Historia izay nosoratan'i Pliniosy Be Taona, olom-pirenena romana niaina tamin'ny taonjato volalohany tal. J.K. Nanatambatra asa soratra misy toko fito amin'ny telopolo izay mikasika ny tantara natoraly, ny zavakanto, ny maritrano, ny haitsabo (médecine), ny jeôgrafia, ny jeolojia ary ny fiendriky ny tontolo manodidina azy izy. Ao amin'ny sasintenin'ny bokiny izy nanatambatra fisehoan-javatra roa alina, avy amin'ny asa soratry ny mpanoratra hafa miisa maherin'ny roanjato, mbola nampiany fisehon-javatra hafa araka ny traikefany. Nivoaka tamin'ny taona 77 na 79 tal. J.K. teo ilay asa soratra, na dia tsy tapitra ny namarana ny asa fanaporofoana alohan'ny fahafatesany izy noho izy maty tamin'ny fipoahan'ny afotroa Vesovio tamin'ny taona 79 tal. J.K.
Arabo ary Persana
Isidoro de Sevila
I Isidoro de Sevila (560-636), eveka niaina tamin'ny taonjato fahafito tao Hispalis (Sevila) no mpanoratra ny raki-pahalalana voalohan'ny Andro Antenantenany. Ny raki-pahalalana nosoratany tamin'ny taona 630, izay mitondra ny anarana ahoe Etymologiæ, dia fitambaram-boky roapolo, izay ahitana fanadihadiana momba ny fiforonan'ny teny anaty toko 448. Io boky io dia tiany hitahirizina sy hampitana ny fahaizana tamin'ny Andro Antenantenany sy ny kolontsaina klasika izay andalam-pahaverezana. Nalaza be ilay bokiny ary naverina natonta impolo io bokiny io teo anelanelan'ny taona 1470 sy 1530, izay mari-palazany hatramin'ny Andron'ny Fanavaozana (frantsay: Renaissance). Somary mahafanina ihany ny fomba famaritany ny fiforonan-teny: hazavainy amin'ny alalan'ny teny mifanakaiky ara-peo aminy ny teny iray (Rex a recte agento, "mpanjaka no antsoina ilay mahitsy fanao"). Ny tanjon'ireo etimolojia (izay nihomezan'ny manam-pahaizana tamin'ny Renaissance) ireo hono dia mikendry ny fanamorana ny fahazona ny famaritana ao an-tsain'ny mpamaky. Nandray anjara tamin'ny fiharetan'ny asa soratry ny Andro Antenantenany tamin'ny alalan'ny fitanisany azy.
Taonjato faha-20 ary faha-21
Ny raki-pahalanana an-tranonkala malaza indrindra dia ny Wikipedia, tranonkala fahafito be mpamangy indrindra izay manana sampanana amin'ny fiteny maherin'ny 250. Ny mahasamihafa an'i Wikipedia amin'ny raki-pahalalana hafa dia izy manana votoatiny azo ovaovaina m-pahalalahana.
Ankoatran'ny Wikipedia, ireo raki-pahalalana an-tranonkala dia ny Encarta, raki-pahalanana andoavam-bola izay nikatona tamin'ny taona 2009 noho ny fahombiazan'ny Wikipedia.
Ny boky dia zavatra azo tsapain-tanana mitahiry ny fampahalalana amin'ny alalan'ny pejy taratasy voaprinty nakambana ary nasiana fonony henjana. Ao amin'ny pejim-boky dia mety ahitana sarisary.
Mety firaketana fampahalalana mikasika ny zavatra tokana na maro ny boky. Ny Baiboly, ny Iliady ary ny Odisey izao ohatra dia boky iray ahitana tantara maro. Ny boky raki-pahalalana dia matetika ahitana lahatsoratra nosoratan'olona maro, ary atonta printy ka tsinjaraina ho boky maro.
Ireo olona tsy afaka mamaky ny lahatsoratry ny boky na tsy afaka mamaky teny dia antsoina hoe "bado".
Citizendium dia raki-pahalalana malalaka eo amin'ny aterineto izay mampiasa ny teknolojia Wiki. I Larry Sanger no namorona azy io, izay anisan'ny mpamorona an'i Wikipedia ihany koa tamin'ny taona 2001.
Ny Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana na Enciclopedia Espasa-Calpe dia raki-pahalalana espaniola lehibe ny taonjato faha-20.
Kiwix dia rindra malalaka (logiciel libre raha amin'ny teny frantsay), io fitaovana io dia ahafahana mijery na miditra amin'ny pejy web izay tsy mila aterineto. Noho izany dia natao ampiasain'ireo mampiasa raki-pahalalana wikipedia amin'ny toerana tsy misy rezô izy io. Tehirizina ao amin'ny karta SDHC tsotra ilay izy, ary tamin'ny daty 1 Febroary 2013 no nivoahany voalohany, io fitaovana io dia niakatra 97% ny olona nampiasa azy tao amin'ny tranokala SourceForge.net no nahazahoana izany salanisa izany.
Lawrence Mark Sanger, na antsoina hoe Larry Sanger (teraka tamin'ny 16 Jolay 1968 tao Bellevue, Washington).
Izy dia tera-tany Amerikana manana diplôma amin'ny filozofia sady anisany angady nananana sy vy nahita ny raki-pahalalana wikipedia voalohany.
Na dia anisan'ny asa soratra feno indrindra avy amin'ny Taona latina Taloha aza io zavatra io, tsy hita ny firaketana ambon'ny papyru, fa singantsingan-taratasy mateza nosoratana nandritra ny taonjato fahadimy ary singan-taratasy tamin'ny taonjato fahavalo. Ilaina niandry ny taonjato faha roa ambin'ny folo isika vao afaka mijery ny versiona tanteraka ary ny fanontana nataon'i Nicolas Jenson ny taona 1469, izay tsy dia nisy nahalala. Nanonta azy fanindroany i Sweynheym ary Pannartz tamin'ny 1470 avy amin'ny fanontan'i Giovanni Andrea Bussi, evekan'i Aleria. Ekena fa toerana nitombohan'ny fomba ara-tsoratra nentindrazana ilay santiôna farany teo.
Ny wiki dia fitaovana ahafahana mandavorary votoatin'ny sehatra iray amin'ny tranonkala ka ahafahan'ny mpitsidika rehetra nomena alàlana hanova ny votoatin'ny pejy ao anatiny. Manamora ny fiaraha-manoratra lahatsoratra ny wiki, koa rehefa olona maromaro no miara-mamolavola lahatsoratra iray dia tena ahitana tombontsoa ny mampiasa wiki. I Ward Cunningham no namorona ny wiki voalohany tamin'ny taona 1995, tamin'ny ampahan'ny sehatra iray miresaka momba ny programmation informatika, ary WikiWikiWeb no anarana nomeny an'izany. Avy amin'ny teny hawaianina hoe wiki wiki, izay midika hoe « maikamaika » na « informel » no nahazoana ny teny hoe « wiki ». Ampy fahamatorana ny wiki taty amin'ny taona 2000 ary efa nifandray tamin'ny Web 2.0 ihany koa. Ny raki-pahalalana Wikipedia izay niforona ny taona 2001 no nanjary sehatra wiki be mpitsidika indrindra eran-tany.